यो उल्लेखनीय डन चिहान
मास्को को दक्षिण-पश्चिम स्थित डन चिहान, राजधानी सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक cemeteries को छ। यसलाई रूसी इतिहास, राजनीति, संस्कृति र विज्ञान मा एक छाप छोडेका छन् जो धेरै व्यक्तित्व गाडे छन्। हामी वास्तु र ऐतिहासिक स्थलहरुको नियालेर।
धेरै ऐतिहासिक र वास्तुकला साइटहरु जग को मिति, शताब्दीयौंदेखि अवस्थित, हामी मात्र बारे न्याय गर्न सक्नुहुन्छ। मास्को मा डन चिहान तिनीहरूलाई लागू हुँदैन। ऐतिहासिक स्रोतहरू यो 1591 हो, यो पहिलो गम्भीर को सही मिति राखिएको छ। यो चिहान परंपरागत मास्को गरेको Donskoi विहारको सरहद मा, त्यसै वर्ष मा स्थापित संग खुलेको छ। यो क्राइमन भन्दा विजय सम्झना गर्न erected थियो खान Giray र सम्मानको नाम परमेश्वरको डन आमा। यो छ Sergiy Radonezhsky को प्रतिमा अन आशिष् राजकुमार दिमित्री Kulikov युद्धमा। Donskoy विहार शताब्दीयौंदेखि रूसी अर्थोडक्स चर्च सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक केन्द्र को एक लागि थियो। यसको वास्तुकला टुकडी वर्तमान दिन मध्य युग देखि रूसी वास्तुकला विकास illustrating, स्मारक को एक अद्वितीय संग्रह भयो।
को Donskoi विहारको कब्रिस्तान मा
त्यहाँ रूस मा धेरै महत्त्वपूर्ण मान्छे को अन्तिम घरबार ठाउँ ठीक डन चिहान थियो भन्ने तथ्यलाई केही आश्चर्यजनक छ। मास्को, रूसी राज्य पुरातन राजधानी, यसलाई जग समय रूपमा प्रारम्भिक रूपमा तत्काल वरपर मा राखिएको थियो। र Donskoy विहार शहर को प्राकृतिक वृद्धि संग पहिलो सँगै necropolis रूपमा मास्को इलाका भाग भयो, र त्यसपछि आफ्नो सरहद भएनन्। तर अभिजात वर्ग को दफन को ठाउँ र डन चिहान को आचरण रूपमा अठारौँ शताब्दीको दोस्रो आधा चिनिन थाले। यो कब्रिस्तान सबैभन्दा मात्र होइन मास्को मा, तर रूस भर सम्मान र प्रतिष्ठित एक मानिन्थ्यो। यसलाई मा गाडे भइरहेको को सम्मान योग्य, हरेक छैन नश्वर हुन सक्छ। यद्यपि, पुरानो डन चिहान रूसी समाज विभिन्न सामाजिक strata देखि मान्छे को दफन स्थान हो। यहाँ 1812 को देशभक्तिपूर्ण युद्ध, को Decembrist क्रांतिकारियों को सदस्य, प्रमुख statesmen र सार्वजनिक तथ्याङ्कले, लेखकहरूले र कलाकारहरू को चिहानहरू छन्।
मास्को मा डन चिहान आज
वर्तमान मा ऐतिहासिक गिर्जाघरको छेउछाउको चिहान को कुल क्षेत्र बारे 13 हेक्टरमा छ। आधुनिक डन चिहान पुरानो र नयाँ विभाजन गरिएको छ। दुई क्षेत्रमा प्रत्येक यसको आफ्नै प्रवेश छ र नि: शुल्क भ्रमणमा लागि खुला छ। एक प्रशासनिक अर्थमा, डन चिहान राज्य एकात्मक उद्यम "रीतिथितिअनुसार" को एक उपशाखा छ। यो संगठन गिर्जाघरको छेउछाउको चिहान को चिहानहरू लागि र उचित फारममा स्याहार प्रदान गर्दछ। को चिहान श्मशान मा बिसवां को अन्त functioned र columbaria को पर्खालहरु मा खरानी संग दफन urns प्रदर्शन देखि यहाँ छन्। को Donskoy चिहान को क्षेत्र मा कुनै burials हाल उत्पादन भइरहेको छैन। यो नियम अपवादहरूको शायद मात्र अनुमति छ।
अझै चिहान नयाँ चिहानहरू कहिलेकाहीं देखिन्छन्। ऐतिहासिक चिहान मा दफन बारेमा निर्णय उच्चतम राज्य स्तरमा स्वीकृत छन्। त्यसैले, अक्टोबर 2005 व्हाइट सेना जनरल ए आई Denikina को निर्वासनमा कमान्डर र रूसी दार्शनिक आई ए Ilina मा मरेको को reburial मा Donskoy चिहान एउटा अपवाद रूपमा। यी मानिसहरू रूस आफ्नो इच्छा अनुसार, मृत्यु पछि फर्के। र अगस्ट 2008 ऐतिहासिक कब्रिस्तान मा उहाँले एक प्रमुख रूसी लेखक, publicist र गाडे सार्वजनिक आंकडा ए आई Solzhenitsyn।
जब हजामको दिवस? छुट्टी इतिहास
पुस्तकालय Jubilee लिपि। पुस्तकालयहरु मा प्रदर्शनी
स्मारक Lukhovitsy मा "ककडी-breadwinner": विवरण, ठेगाना र समीक्षा
हामी मानव सम्भावनाहरू को थाहा छ? मानव क्षमताहरु को विकास
टमाटर Caspar, टमाटर को सबै भन्दा राम्रो प्रजातिहरू मध्ये एक।
स्वगत भाषण: यसको सुविधा र विशेषताहरु
कसरी कार्टून Cheburashka आकर्षित गर्न
माथिल्लो मानव limbs को हड्डी
घरमा अनुहार मास्क मइस्चराइजिंग
सुस्त पागलपन। लक्षण र संकेत